KHALADAADKA CAANKA AH EE NAQSHADEYNTA BEERTA. QAYBTA 3: QALABKA, MURAAYADAHA IYO SAFKA BEERAHA - WARARKA
Khaladaadka caanka ah ee naqshadeynta beerta. Qaybta 3: Qalabka, muraayadaha iyo safka beeraha
Maantana waxaan ka hadli doonnaa xulashada sawirrada beerta, oo ku saabsan isticmaalka saxda ah ee muraayadaha, mana dhaafeyno dhibaatada dhirta dhirta.
Iyadoo la falanqeynayo khasaarihii caadiga ahaa ee qurxinta, waxaan awoodi karnaa in aan soo qaadno fikradaha asalka ah ee qurxinta muuqaalkayaga.
Cilad 1. Xaqiijin xad dhaaf ah oo leh tirooyin iyo qalabyo
Sawirada beeraha ayaa aad u caan ah dalalka wadamada qaarada yurub.
Tirooyinkani waxay siiyaan beertiisa midnimadiisa, aura gaar ah, samaynta muuqaalka dhabta ah waa mid cajiib ah.
Mararka qaar waa ku filan tahay in la dhigo hal xayndaab oo ku yaal bartamaha goobta, waxana uu siin doonaa dhamaystirka dhammaan halabuurka..
Sawirro ka sameysan caag, bac, iyo dhagax waa in ay soo jiidaan cawska, cawska caleenta, oo aan haysan dhirta nool. Waa in la xusuusnaado in hawsha ugu muhiimsan ee tirooyinka ay tahay in ay xooga saaraan naftooda, sidaas darteed waxay u eegi doonaan faa'iido leh, tusaale ahaan, wadada wadada ee waddada ama meel u dhow gawaarida xagaaga.
Dhibaatada xigta - doorashada xulashada sawirrada. Farsamayaasha muuqaalka waxay inta badan kugula taliyaan alaabta dabiiciga ah (alwaax, gypsum, dhagxan), laakiin maaddada faylka ah ee macdanta oo ka kooban aluminium hydroxide iyo rinjiyuutarka ayaa sidoo kale noqon kara ikhtiyaarka ugu fiican. Polistoun kama cabsiiso heerkul aad u fara badan, waxay la soo baxaan xaalad kasta oo cimilada ah mana siinayso isbedelka.
Khabiirada naqshadeynta beerta waxay kugula talinayaan inay saldhigaan hal ama laba qalab Qorshuhu wuxuu ku jiri karaa sawir kasta, muuqaal ah oo farshaxan kasta oo si macquul ah ujira. Tusaale ahaan, dabaqyada ka samaysan dhagaxa iyo mashiinka waxay ku habboon yihiin beerta jaceylka ah. Nidaam kale oo kale ayaa ah xulashada aagagga shuruudaha leh, halka aag kasta uu leeyahay muuqaal gaar ah. Tusaale ahaan, dhirta qadiimiga ah waxay u muuqan doontaa mid dabiici ah oo leh amphoras, iyo libaaxyada naxaasta ah ee geesaha goobtu waxay wajihi doonaan isha cajiibka ah ee bartamaha beerta.
Ma aha oo kaliya "astaamaha" waxaa loo aaneyn karaa tirooyinka, laakiin sidoo kale noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah: kursi, buundooyin, dayrarka ubaxa, ubaxa midabka leh. Fikradaha asalka ah ee asaasiga ah ee hirgelinta waa in laysku daraa tirooyinka, jilayaasha.
Qodobka 2. Isticmaalka khaladka muraayadaha khaldan.
Muraayada waxaa loo isticmaalaa in si muuqata loo balaadhiyo xuduudaha dhulka ama in lagu qurxiyo foomamka dhismaha.
Iyada oo aad, waxaad u xoojin kartaa quruxda dabeecadaha beerta, tusaale ahaan, model ah kaydka muraayad leh dillaacu wuxuu soo nooleyn karaa meel kasta oo beerta ah.
Hawlaha ugu muhiimsan marka lagu rakibayo muraayad waa in ay ahaataa mabda'a ah aragtida dabeecadda. Tusaale ahaan, kubbadaha yaryar ee muraayadaha yaryar waxay u egyihiin geedo wanaagsan, halkii aad ka heli lahayd jidka waxaad u samaysan kartaa muraayad oval.
Si aad si habboon u samayso muraayadda muraayadda boggaaga, waa inaad raacdaa xeerarka soo socda:
Ha dhigin muraayadaha dhinaca galbeed ee beerta. Subaxdii, waxay ka tarjumayaan qorraxda dhalaalaya, taas oo ah habka ugu wanaagsan ee lagu saameeyo sii kordhaya ee u dhow dhirta.
Ku rakibidda muraayadaha meel bannaan laguma talinayo, si looga fogaado waxyeelada shimbiraha. Haddii muraayada hore loogu rakibay aag furan, waxaa lagula talinayaa in la soo saaro shimbir shimbir ah oo ku taal meel u dhow ama xayawaan yar oo xayawaan leh.
Waa inuu keenaa xagasha lagama maarmaanka ah. Muraayadaha ayaa lagu dhejiyaa goobta xagasha qaarkood ee waddada, meelaha cagaaran. Nidaamka qotodheer ee qaab-dhismeedku wuxuu u horseedi doonaa luminta saameynta la rabo ee sii socota dabeecadda ku xeeran iyo beerta, muraayadda lafteedu ka fog tahay waxay u muuqan doontaa qaab caadi ah.
Ku darida wanaagsan ee muraayada waxay noqon kartaa nalalka LED, figarines dhalada. Wadada isku dhafka ah ee wadooyinka, muraayadaha mashiinka iyo dhagxaanta dhagax ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysato "geed qallalan" beerta.
Cidhifyada jugged ee muraayadaha kala duwan ku dar waxyaabo aan la saadaalin Karin kara kara xitaa khabiirada ugu khibrad badan.
Waxaa haboon inaad xusuusatid in muraayadda goobta ku taal mar walba ay tahay xal macquul ah oo kuu ogolaaneysa inaad ku daboosho dareenka ugu ducada ah ee beerta u soo jiido geeska qoyska.
Cilad 3. Dhirta kala duwan ee dhirta markaad beerto
Haddii aad dhirta dhirto meel fog oo midba midka kale ka mid ah, waxaad ka heleysaa saamaynta abuurka, laakiin maaha naqshad.
Dalagyada qurxinta waa in lagu beeray daahyo, i.e., meel bannaan oo ku xiran waddooyinka ama cawska..
Waxaa la sheegi karaa in muraayadaha ay yihiin qaybta beerto ee qurxinta.
Qodobbada hoose ee meelaynta dheeraadka ah waa in lagu dhejiyaa safka hore.
Inta u dhaxaysa labada saf ee si looga ilaaliyo xayawaanka yaryar, waxaa lagula talinayaa in lagu adkeeyo biraha birta ah ee dhagaxyo alwaax ah, ka dibna, sida dhirtu u koraan, xariggu wuxuu noqonayaa mid aan muuqan.
Looma baahna in dhirbaaxada si adag loo xiro, yaraynta masaafada u dhexeysa iyaga si ay u sameeyaan dhirta cufan.
Marka geedi socodka koritaanka, duurka ayaa ka hortagi doona midba midka kale, wuxuu abuuri doonaa tartan, oo caqabad ku ah horumarinta midba midka kale, taas oo ugu dambeyntii u horseedi doonto xadgudub ku dhisan sharafta muuqaalka dusha. Si kastaba ha ahaatee, tani ma khusayso dalagyada ornamental, taas oo sii kordhaysa cufnaanta sare.
Iyo maxaa qalad ah oo aad ku samaysay qaab-dhismeedka beertaada?